Etu ibudata Photomath maka PC Free (Kacha ọhụrụ na Version) | Akụkọ akụrụngwa
PhotoMath aghọwo ihe a ma ama ngwá ọrụ maka ekwentị anyị, yana ya anyị nwere ike iji igwefoto nke ọnụ anyị dozie nsogbu mgbakọ na mwepụ ọ bụla. Onye nrụpụta ya akpọọla ngwa ahụ ka ọ bụrụ mgbako izizi dabere na igwefoto, mana kama ọ bụ ngwa ọrụ bara oke uru maka izi ihe n'ụlọ, ebe ọ nwere ike inyere ndị nne na nna chọrọ inyere ụmụ ha aka ime ihe omume ụlọ akwụkwọ ha. Na ngwa a, anyị na - ese foto nke ihe nhọta ọ na - enye anyị nsonaazụ, yana ntuziaka iji mezuo ya site na nkwụsị.
Ma, Enwere ike iji ngwa a na kọmputa anyị? Ee, ọ bụ ezie na maka nke a, anyị ga-eji gam akporo emulatorỌ bụghị nsogbu mana ọ nwere ike bụrụ ihe iru ala nye ụfọdụ ma bụrụ ihe na-agwụ ike. Ọ bụ karịsịa bara uru n'ihi na ndị na-achọghị ka ha mobile nso mgbe ha na-amụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ. O doro anya na ụmụ akwụkwọ ma ọ bụ nne na nna ọ bụla ga-enwe obi ụtọ ịnwe ngwá ọrụ a n'ọtụtụ ngwaọrụ dị ka o kwere mee. N'isiokwu a anyị ga-egosi gị otu esi ebudata PhotoMath na PC gị n'efu na ụdị ya kachasị ọhụrụ.
1 1. Download ihe gam akporo emulator maka PC
2 2. Wụnye Android emulator na PC anyị ma ọ bụ macOS.
3 3. Budata Photomath
4 Ngwa Android na-akpali mmasị iji ulateomi na PC
4.2 Otu WhatsApp
1. Download ihe gam akporo emulator maka PC
Ngwa a dị maka gam akporo yabụ anyị ga-e Androidomi gam akporo site na PC anyị, maka na enwere ọtụtụ mmemme, mana anyị ga-akwado otu ọkachasị, ọ bụ Bluestacks. Ọ bụ doro anya na ihe ndị kasị ewu ewu na gam akporo emulation mmemme, kamakwa ndị kasị oru oma na ọtọ. Na mgbakwunye na ịbụ onye arụ ọrụ kachasị, ịwụnye ya nwere uru na ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu, anyị ga-enwe ọtụtụ puku ngwọta n'otu Pịa na weebụ.
Budata Bluestacks na njikọ a maka PC ma ọ bụ MAC.
Nwere ike ilele nchịkọta nke gam akporo emulators nke anyị mere na mbụ na weebụ, na njikọ a ọ bụrụ na ị nwere macOS, ma ọ bụ na nke ọzọ ọ bụrụ na ị nwere Windows PC.
2. Wụnye Android emulator na PC anyị ma ọ bụ macOS.
Iji wụnye Bluestacks emulator dị mfe, anyị ga-abanye na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị wee malite nbudataAnyị ga-ahụ ya na folda nbudata nke otu anyị. Ozugbo nbudata nbudata zuru ezu, anyị ga-eme faịlụ nwụnye ma mechaa ya na-eso ntuziaka niile, kpachara anya ịghara ịtinye mgbakwunye maka ihe nchọgharị ma ọ bụ nabata ụdị mgbasa ozi ọ bụla maka akwụkwọ ozi anyị.
3. Budata Photomath
Inwe emulator zuru ezu arụnyere na kọmputa anyị, naanị anyị ga-agba ya na chọọ ogwe ọchụchọ, n'ime ya ka anyị ga-ede PhotoMath ma họrọ ya. A ga-emeghe ohere ịnweta ụlọ ahịa ngwa Google ma ọ ga-egosi anyị na Bluestacks. Naanị anyị ga-pịa bọtịnụ ntinye dị ka anyị ga-etinye na mkpanaka gam akporo ọ bụla.
Ozugbo echichi ahụ mechara, anyị ga-ahụ akara ngosi ya na nke anyị drawer nke ngwa arụnyere, ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịchọta ya, anyị ga-enweta ya site na iji injin nchọ nke emulator. Buru n’uche na e mepụtara ngwa ahụ maka ekwentị mkpanaaka ka ọ nwere ike ịnwe ụfọdụ ntụpọ ndị ọzọ na-eji ya na kọmputa emulator.
Ihe ngosi ndị a bara uru maka kọmputa nwere sistemụ arụmọrụ Windows yana maka kọmputa nwere sistemụ arụmọrụ macOS.
Ngwa Android na-akpali mmasị iji ulateomi na PC
Enwere ọtụtụ ngwa ma ọ bụ egwuregwu na-atọ ụtọ anyị na-enweghị ike ịchọta na kọmpụta anyị, mana anyị nwere ike i emomi n'enweghị nsogbu na Bluestacks, anyị ga-akpọ ụfọdụ n'ime ihe na-atọ ụtọ.
Onye nchịkọta akụkọ foto dị egwu nke ga - eme foto anyị kacha ochie dị ka nke kachasị dị ugbu a ejiri igwe ese foto ọgbara ọhụrụ mee, Ọ bụ ngwa nwere ọrụ nke nhicha foto anyị bịara na nhịahụ ma ọ bụ pixelated na anyị zere mgbe mobiles abụghị ihe ha bụ ugbu a.
Ihe si na ya pụta bụ ihe ijuanya, Ọ bụ ezie na ha agaghị adị ka foto kachasị mma anyị na-ese taa, ha ga-enyefe foto niile anyị achọghị ịla n'iyi. mana o gosighi. Ọ bụrụ na anyị nwere nnukwu gallery nke foto ochie nke anyị na-achọ ogologo oge iji rụkwaa, nke a bụ ohere anyị na nke kachasị mma bụ na ọ bụ n'efu maka gam akporo ka anyị wee wụnye ya ma weghachite ndị ahụ niile foto otu n'otu ma chekwaa akwụkwọ ndị editọ n'ime folda.
Agbanyeghị na enwere ụdị ntanetị nke WhatsApp nwere ọtụtụ ọrụ, ọ dabere na njedebe anyị mgbe niile ma enweghị ọrụ niile anyị na-enwe na ekwentị anyị, yana ụdị gam akporo ya maka emulator, anyị ga-anụ ụtọ a WhatsApp nwere onwe ha nke anyị nwere ike ijikọ ọnụ ọgụgụ ekwentị ma kpọọ oku vidiyo na ọrụ ya zuru oke na-enweghị nsogbu.
Ngwa a ma ama ịmanye site na forums kachasị amasị anyị, na-enwe ha niile agbakọtara yana sistemụ ozi nọọrọ onwe ha ozugbo, bụ ihe ọzọ na ngwa ndị ahụ anyị nwere ike ịnụ ụtọ ya na emulator Android. Na mgbakwunye na ịgbaso ọgbakọ anyị kachasị amasị, ọ na-enyekwa anyị ohere ibugo foto ma nwee ọkwa nke ha niile n'otu ntabi site push ificationsma Ọkwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Etu ibudata Photomath maka PC Free (Kacha ọhụrụ na nsụgharị)